के कारणले वेबसाइटहरूलाई बिस्तारै लोड गर्न सकिन्छ र Semalt द्वारा यसको समाधानहरू
स्पिड वेग गति इन्टरनेट बोल्ने एक भाषा हो। गति बाँच्नको लागि आवश्यक भएको छ। यसैले अब तपाईसँग दिमाग उडउने द्रुत कार, विमान, डुes्गा, र समाचारहरू छन्। सबैजना चीजहरू सकेसम्म चाँडो गर्न चाहन्छ किनभने हामीसँग पर्याप्त समय छैन।
वेबसाइटहरू यस सम्झौतामा छोडिदैनन्। इन्टरनेटमा बाँच्नको लागि, तपाईंसँग एक सेकेन्डको अंशहरूमा तपाईंको वेबसाइट लोड हुनुपर्दछ। यो किनभने कसैको लागि कुर्ने पर्याप्त समय छैन, र तपाइँ अशुभ हुन चाहनुहुन्न, आशा राख्नुहुन्छ कि तपाइँको आगन्तुक एक मिनेट प्रतिक्षा गर्न पर्याप्त धैर्यवान छ कि तपाइँको वेबसाइटलाई पूर्ण रूपमा लोड हुन दिन्छ।
तपाईंको वेबसाईटले यसको यातायात बढाउनको लागि सकेसम्म चाँडो लोड गर्न सक्षम हुनु आवश्यक छ, तपाईंको रैंकिंगमा पार्ने प्रभावहरूको बारेमा कुरा गर्न। जबदेखि गुगलको मोबाईलगेडन, पृष्ठ गति धेरै वेबसाइट मालिकहरूको लागि चिन्ताको गम्भीर कारण भएको छ। यो मात्र थिएन किनकि त्यहाँ बढि मोबाइल आगन्तुकहरूको माग बढेको थियो तर वेबसाइटका कारण उनीहरूले सम्भावित लीडहरू र आगन्तुकहरू गुमाउँदै छन् भन्ने महसुस गर्न थालेकाले ढिलो वेबसाइटको कारणले गर्दा होईन।
वेबसाइटहरूले यो पनि बुझ्न थाल्यो कि छिटो वेबसाईटहरूले गुगलको स्तर निर्धारणमा सुधार ल्यायो, र फेसबुक जस्ता सोशल मिडिया प्लेटफर्मले पनि यसको प्रयोगकर्ताहरूमा तत्काल लोड हुने लेखहरूलाई धक्का दियो। साईटहरूले उनीहरूको पृष्ठको लोडिंग गति सुधार गर्न शुरू गर्‍यो, आगन्तुकहरूलाई कुनै ढिलाइ बिना स्क्रोल गर्न अनुमति दिईयो।
ढिलो वेबसाईटलाई के ठानिन्छ?
त्यहाँ कति छिटो छिटो छिटो लाग्ने भनेर पत्ता लगाउनमा समस्या छ? हो, तपाइँको वेबसाइट छिटो लोड हुन्छ, तर छिटो एक सापेक्ष शब्द छैन? तपाइँको वेबसाइटको लोड कति छिटो छनौटको निर्णय तपाइँ छिटो मान्नुहुने द्वारा निर्धारण गर्दछ। यद्यपि Semalt तपाइँको वेबसाइटमा निदान चलाउन सक्दछ, प्रत्येक पृष्ठ कति छिटो लोड हुन्छ भनेर पत्ता लगाउनुहोस्, र एक द्रुत वेबसाइटसँग भएको स्पीडलाई मानक गतिसँग तुलना गर्दछ।
वेबसाइट लोड कति छिटो मापन गर्न प्रयोग गरिएको मापदण्डहरू जेफ केन्यनले गरेको अध्ययनबाट आउँदछन्, जहाँ उसले गतिलाई तुलना गर्दछ र परिणाम प्रदान गर्दछ जुन तपाईंको वेबसाइट कती छिटोमा मार्गनिर्देशकको रूपमा प्रयोग हुन्छ।
एक विशिष्ट गति सबै भन्दा राम्रो हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न प्रत्येक गतिले केवल वेबसाइटहरूको प्रतिशत मात्र देखाउँदछ जुन यो भन्दा छिटो छ। यस तरिकाले, साईटहरूले कि त उनीहरूको हालको गतिलाई हराउन वा उनीहरूको वेकमा छोड्ने वेबसाइटहरूको संख्यामा विश्वस्त महसुस गरेर उनीहरूको हालको गति कायम राख्नको लागि आकांक्षा गर्न सक्छन्।
यदि तपाइँको वेबसाइटहरु लाई seconds सेकेन्ड लिन को लागी, यो इन्टरनेट मा साइटहरु को २%% भन्दा छिटो छ।
यदि तपाइँको वेबसाइट मा लोड गर्न २.9 सेकेन्ड लाग्छ, यो लगभग इन्टरनेट को 50०% भन्दा छिटो छ।
यदि तपाइँको वेबसाइटहरु लिन को लागी १.7 सेकेन्ड, यो इन्टरनेट मा साइटहरु को लगभग approximately 75% भन्दा छिटो छ।
यदि तपाइँको वेबसाइट ०.8 सेकेन्डमा लोड हुन्छ भने, यो इन्टरनेटमा वेबसाइटहरूको%%% भन्दा छिटो हुन्छ।
यद्यपि, अन्य अध्ययनहरूले प्रकाशित गरेको छ कि वेबपृष्ठहरूको लागि औसत लोड गति उनीहरूको उद्देश्यमा निर्भर थियो। गुगल वेबमास्टर भिडियोमा, उनीहरूले सल्लाह दिए कि २ सेकेन्ड एक वेबसाइटको औसत गति हो यदि यो ईकामर्स उद्देश्यको लागि हो भने। यद्यपि गुगल आफैले ०. 0.5 सेकेन्डको लागि लक्ष्य गरिरहेको छ।
यसले प्रत्येक दोस्रो गणना र Semalt मा, हामी एक प्रतिशतमा तपाईंको वेबसाइट डिजाइन र विकास गर्दछौं। यो खराब विचार हुने छैन यदि हामीले गुगललाई तपाईंको वेबसाइट ०. seconds सेकेन्डमा लोड गर्नका लागि हरायौं।
जहाँसम्म, केहि समस्याहरूले वेबसाइटहरूलाई लोड गर्नमा धेरै समय लिने निम्त्याउँदछन् र यी समस्याहरू र उनीहरूका समाधानहरू साझा गर्न पाउँदा खुशीको भन्दा बढी Semalt गर्दछ।
कुन कारणले वेबसाइटहरू बिस्तारै लोड हुन्छ र उनीहरूका समाधानहरू?
खराब सर्भर प्रदर्शन
जब एक आगन्तुकले गुगल SERP मा एक वेबसाइट लिंक क्लिक गर्दछ, ब्राउजरले सर्भरमा पिंग गर्दछ र वेबसाइट लोड गर्न सबै आवश्यक जानकारी अनुरोध गर्दछ, यो प्रक्रिया सामान्यतया केही सेकेन्ड लिन्छ, तर यो ढिलाइ हुन सक्छ। यदि सर्वर तपाईंको वेबसाइट होस्ट गरिएको छ, वा तपाईंको सर्वर योजना कमजोर छ भने, यो डाटा अनुरोध गर्ने र प्राप्त गर्ने प्रक्रिया ढिला भयो। यो समस्या सामान्यतया पहिलो हुन्छ किनकि सबै कुरा उचित रूपमा कन्फिगर गरिएको भएता पनि तपाईंको सर्भर प्रदर्शनमा अन्तिम बताउने छ तपाईंको वेबसाइट कति छिटो लोड हुन्छ। सस्तो होस्टिंग सेवाहरूको लागि छनौट भनेको तपाइँको वेबसाइटले एक साझा सर्वर चलाउनेछ। यद्यपि यो विकल्प सस्ता छ, प्रत्येक सर्भरमा वेबसाइटहरूको लाम छ, तपाईंको वेबसाइटलाई बिस्तारै लोड गर्दै।
यस समस्याको समाधान एक राम्रो वेब होस्ट प्राप्त गर्न वा तपाइँको सर्भर प्राप्त गर्न हो। एक व्यक्तिगत सर्भर हुनु तपाइँको वेबसाइट अविश्वसनीय छिटो बनाउँछ, र यो तपाइँको वेबसाइट को लागी कुनै पनि समय मा अधिक यातायात संग राम्रो गति कायम गर्न सक्षम गर्दछ।
के तपाईंले याद गर्नुभयो कि लामो दूरीका कलहरू सम्पर्क गर्न प्राय: लामो समय लाग्छ? यो किनभने दुबै उपकरणहरू जडान गर्न आवश्यक जानकारीको लागि धेरै लामो यात्रा गर्नुपर्दछ। यो समान विचार सर्भरमा लागू हुन्छ - वेबसाइट पहुँच गर्न कोशिस गर्दै उपकरणबाट दूरी र सर्भर मामिलाहरूमा। लामो दूरीको मतलब अधिक केबलहरू, र उपग्रहहरू आवश्यक पर्दछ। अमेरिकी प्रयोगकर्ताले डेनमार्कमा सर्भर पिंग गर्न खोज्नुको अर्थ भनेको वेबसाइट लोड गर्नका लागि जानकारी आधा बाटोमा यात्रा गर्नुपर्नेछ र वेबसाइट लोड हुनु अघि फेरि यात्रा गर्नुपर्नेछ। यो वेबसाईट लोड ढिलो बनाउने छ जब एक यूएस मा एक यूएस मा एक सर्भर पिंग गरीन्छ।
समाधान केवल एक मात्र होईन तर बहुविध सर्वरहरू तपाईंको वेबसाइट होस्टिंगमा। यसले स्थानीय उपयोगकर्ताहरूको लागि स्थानीय सर्वरहरूको पहुँच गर्न सजिलो बनाउँदछ तिनीहरूको सals्केतहरू लामो दूरीको यात्रा गर्नु भन्दा।
धेरै धेरै ट्राफिक
एक वेबसाइट को रूप मा, हामी बुझ्छौं कि यदि सम्भव छ भने, तपाईं प्रत्येक क्लिक आफ्नो वेबसाइट को नेतृत्व गर्न चाहानुहुन्छ। यस इच्छाको साथ समस्या तपाईंको सर्वर कत्तिको शक्तिशाली छ निहित छ? कुनै पनि समयमा, एक वेबसाइटले प्रयोगकर्ताहरूको केही निश्चित मात्र मात्र बोक्न सक्छ यदि प्रयोगकर्ताहरूको संख्याले यो सीमा नाघ्यो भने, वेबसाइट ढिलो लोड गर्न थाल्छ। यो हुन्छ किनकि सर्भरले धेरै अधिक लोड गर्न सुरू गर्यो। जब यो हुन्छ, सर्भर प्रबन्धकले दर्शकहरूलाई सन्तुष्ट राख्न वेबसाइटमा अधिक स्रोतहरू समर्पण गर्न आवश्यक छ।
समाधान तपाईको सर्वर योजना र क्षमता सुधार गर्ने हो। तपाईंको वेबसाइटको होस्टले बोक्न सक्ने प्रयोगकर्ताहरूको संख्या सुधार गर्दै, तपाईं आफ्नो वेबसाइटमा बढ्दो ट्राफिकलाई व्यवस्थित गर्नको लागि पर्याप्त रस दिनुहुन्छ।
अत्यधिक फ्ल्यास सामग्री
फ्ल्यास सामग्री एक वेबसाइट को अन्तरक्रियाशीलता सुधार मा एक असाधारण उपकरण हो। जे होस्, यसले वेबसाइटको लोड गतिलाई धीमा गर्न सक्दछ जब त्यहाँ तिनीहरूको अधिक संख्या हुन्छ। यो हुन्छ किनकि फ्ल्यास सामग्री सामान्यतया भारी हुन्छ, र वेबसाइटमा धेरै दबाब राख्दछ, यसले गर्दा अधिक समय लोड हुन सक्छ।
समाधान यदि सम्भव भए फ्लैश सन्देशहरूको आकार कम गर्न, वा फ्ल्यास सन्देशहरूको संख्या कम गर्न हो। HTML5 विकल्पहरू अधिक प्रबन्धित फाइल आकारको साथ अवस्थित फ्ल्यास सामग्री प्रतिस्थापन गर्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
धेरै जाभास्क्रिप्ट, CSS, र धेरै छवि फाइलहरू भएको तपाईंको वेबसाइटमा HTTP अनुरोधहरूको संख्या बढाउनेछ। के हुन्छ जब कसैले तपाइँको वेबसाइट भ्रमण गर्दछ, ब्राउजरले प्रत्येक HTTP अनुरोधको लागि जानकारी अनुरोध गर्नुपर्नेछ, र यदि तिनीहरू धेरै छन् भने, वेबसाइटले अधिक लोड गर्न समय खर्च गर्दछ।
यस समस्याको समाधान तपाईंको वेबसाइटलाई CSS स्प्राइटहरू प्रयोग गरेर HTTP अनुरोधहरूको अधिकतम रकम दिइनेछ। तपाईं फाईलहरूको संख्या पनि कम गर्न सक्नुहुन्छ जुन वेबसाइटमा लोड गर्न आवश्यक पर्दछ। यो गरेर गरेको फाइदा यो हो कि यसले डाटाको मात्रा कम गर्दछ जुन प्रयोगकर्ताले वेब पृष्ठ खोल्दा डाउनलोड गर्न आवश्यक पर्दछ।
उच्च कोड घनत्व
तपाइँको वेबसाइट चकिंगले अनिवार्य रूपमा तपाइँको वेबसाइट अधिक लोड गर्न खर्च गर्दछ। केही चीजहरूले तपाईंको वेबसाइटमा अधिक लोड प्रदान गर्दछ जुन कोड यसको डिजाइनमा प्रयोग गर्दछ। जबसम्म तपाईंसँग घन कोडहरू प्रबन्ध गर्न संसाधनहरू छैनन्, उत्तम छ तपाईं यसलाई सरल राख्नुहुन्छ। उदाहरण को लागी फेस बुक, करिब 62 करोड lines० लाख लाईन कोड छ, गुगलको करिब २ बिलियन छ, तर यी दुबै कम्पनीसँग सुचारु रूपमा चलाउन संसाधन छ। यी घन कोडहरू बोक्न सक्ने शक्तिशाली सर्भर बिना नै, वेबसाइट लोड गर्दै ढिलो हुनेछ।
समाधान तपाईको कोड सफा गर्ने र अनावश्यक लाइनहरुबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ। यो अधिक सेतो खाली ठाउँहरू, इनलाइन स्टाइलिंग, खाली समाचार लाइनहरू, र टिप्पणीहरू हटाएर गर्न सकिन्छ, जुन महत्त्वपूर्ण छैन। अर्को समाधान भनेको सर्वरको क्षमता सुधार गर्नु जुन तपाईंको वेबसाइट होस्ट गरिएको छ।
अपर्याप्त क्यासि techniques टेक्निकहरू
क्यासिaching एक टेकनीक ब्राउजर हो जुन प्राय: पहुँच गरिएको डाटा भण्डारण गर्दछ। यसले वेबसाइट लोड गर्न द्रुत गर्दछ किनकि ब्राउजरले त्यस वेबसाइटको बारेमा केही जानकारी भण्डार गरेको छ, र जब भ्रमण गरियो, यसले सबै डाटा पुन: लोड गर्नुपर्दैन। छिटो डाटा पुनःप्राप्ति संग, वेबसाइट कम समय लोड गर्न खर्च गर्दछ। खराब क्यास टेक्निक हुनु भनेको वेबसाइटले प्रत्येक पटक प्रयोगकर्ताले कुनै विशेष साइट भ्रमण गर्दा सबै डाटा लोड गर्नुपर्नेछ। यस प्रक्रिया दोहोर्याउँदा लोड गति धीमा हुन्छ र नकारात्मक रूपमा प्रयोगकर्ताको अनुभवलाई प्रभाव पार्न सक्छ।
समाधान ब्राउजर/HTTP क्यासिंग र सर्भर साइड कैचिaching लागू गर्न हुनेछ। यद्यपि तपाईं वेबसाइटको लागि जिम्मेवार हुनुहुन्न, यी सुविधाहरूले तपाईंलाई ब्राउजरहरूलाई क्याच डाटा बचत गर्न प्रोत्साहन गर्दछ।
कृपया आज Semalt भ्रमण गर्नुहोस्, र हामीलाई तपाईंको वेबसाइटहरू उल्लेखनीय रूपमा सुधार गर्न हेर्नुहोस्। हाम्रो सेवाहरू विस्तृत छन्, र जब हामी सक्दछौं, तपाईंको वेबसाइट गुगलको पहिलो SERP मा रोकेटमा हुनेछ। हाम्रो साइट वरिपरिको भ्रमणले तपाइँको वेबसाइट, SERP, र SEO को बारेमा तपाइँका हुन सक्ने सबै प्रश्नहरूको जवाफ दिनेछ। हाम्रो ग्राहक सेवा टोली तपाईको कुनै पनि प्रश्नको उत्तर दिन इच्छुक छ।